Xaalada Beledweyne iyo manta | Radio Baidoa
Guriga Wararka Maanta Xaalada Beledweyne iyo manta
Xaalada Beledweyne iyo manta
Weli waxaa saan saan colaadeed laga dareemayaa magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan oo shalay ay ka dhaceen dagaal u dhaxeeyay ciidanka dowladda iyo Maleeshiyaad ku heyb ah Bajaale maalin kahor lagu dilay bartamaha magaalada.
Dagaalkaasi oo ka dhacay saldhigga Booliska magaalada ayaa sababay dhimashada laba ruux iyo dhaawaca saddex kale oo soo kala gaaray dhinacyada dagaalamay.
Wararkii ugu dambeeyay ee saakay aan ka heleyno magaalada ayaa waxa ay sheegayaan in weli ay jirto cabsi ku aadan in dagaal kale uu dhacop, maadaama maleeshiyaadka ay tilmaameen in aysan ku qanceyn wax aan aheyn in ay gacanta ku dhigaan askariga dilay wiilkooda oo ku jira gacanta dowladda.
Ciidamada Millatariga ayaa kala dhex galay ciidamada Booliska iyo maleeshiyo beeleedkii dagaalamayay, waxaana lagu wareejiyay ciidamada Millatariga askarigii ka tirsanaa ciidamada dowladda hoose ee magaalada Beledweyne ee dilay darawalka mooto Bajaajlaha ah.
Waxaa socota waan waan lagu doonayo in lagu qaboojiyo xiisada laguna soo afjaro iyadoo oday dhaqameedyada iyo waxgaradka magaalada Beledweyne ay wadaan dadaalo xoogan oo loogaga hortagayo in dhiig kale daato.
Hase yeeshee waxaa jirta in xalay magaalada Beledweyne laga dareemayay hub urursi iyo diyaargarow dagaal oo ay wadaan labada beel ee xurguftu u dhexeyso.
Sida muuqata masuuliyiinta Hirshabeelle indhahooda ma qabtaan colaada ka taagan magaalada Beledweyne, maadaama qaarkood ay ku hawlan yihiin mooshinka ka dhanka ah Madaxweynaha Hirshabeelle, halka qaar kalena ay wadaan olole ay kaga hortagayaan moo